लामो समय मास्क लगाउँदा आउने समस्या के हुन्? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? - SYMNetwork
लामो समय मास्क लगाउँदा आउने समस्या के हुन्? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार १९:४४ by Senior Editor Nima
माथि उल्लिखित घरेलु उपायले समस्या समाधान नभए दन्त चिकित्सक वा सेवाकर्मीसँग सुझाव-सल्लाह लिनुपर्छ। हाल निषेधाज्ञामा आफ्ना चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न मुश्किल हुने भएकाले नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले आफ्ना दन्त चिकित्सकहरूद्वारा नि:शुल्क सल्लाह दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
Prevकर्णाली प्रदेशसभा : बुधबारको बैठक पनि एमालेद्वारा अबरुद्ध
nextशुक्रबारदेखि युरो २०२०, थाहा पाउनुहोस् सम्पूर्ण जानकारी